Why i can't get my own password in MZ ?? — MYSTERY ZILLION
Why i can't get my own password in MZ ??
MZ မှာ ဘာလို့ ကိုယ်ပိုင် password ယူလို့ မရတာပါလိမ့် ??
MZ ဆိုတာ ဒီဖိုရမ်ကိုပြောတာလား? MZblog.net ကိုပြောတာလားဗျ? ဒီဖိုရမ်မှာဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် password ရပါတယ်။ အစ်ကိုတစ်ခုခုမှားနေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ password ပြောင်းချင်ရင်လဲ User CP မှာသွားချိန်လို့လဲရပါတယ်။
ကျွန်တော့ စိတ်ထင် ကိုဇာနည်ပြောတာ MZblog.net ကိုပြောတာ ထင်တယ်။ MZblog.net က wordpress အတိုင်းပဲလေ။ wordpress မှာ ပြောင်းသလိုပဲ user ထဲကနေ ၀င်ပြောင်းရင် ရပါတယ်။